Visitor is reading 'Rightful heir' to British monarchy dies in Australia
Visitor from SG is reading News Summary from Nepal for Saturday, October 23, 2021
Visitor from SG is reading SUM_OFF's: CHATTING WITH GOD
Visitor from SG is reading family based petition I-485 Interview for Selling Tobacco to
[VIEWED 418 TIMES]
Posted on 07-10-21 10:10 AM Reply [Subscribe]
Umesh Chauhan appointed editor of Kantipur
Chauhan will coordinate and produce editorial contents under the guidance of Kantipur Editor-in-Chief Sudheer Sharma.
धर्मशाला पुगेर पौडेलले लिए क्रियाशील सदस्यता छानविनको जानकारी
मेलम्ची बजारलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गरिनेछ : प्रधानमन्त्री ओली
रौतहटमा करेन्ट लागेर एक किशोरको मृत्यु
राजधानी शहर जलमग्न : बानेश्वरमा घरमा पानी पस्यो, तीनकुनेमा यातायात अवरुद्ध (फोटोफिचर)
कोटेश्वरबाट माधव पक्षका नेताहरु फर्किएसँगै कार्यदलको बैठक सुरु
अस्ताउँदै गरेका क्याराभानहरू
१३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा चश्माघरमा कार्यरत् स्वास्थ्यकर्मी पक्राउ
टप्प टिपी लान्थेन, टारेर टर्थ्यो त्यो
दलितलाई अपमान गर्नेहरू
गगन थापाको प्रश्न- प्रधानमन्त्री ज्यू, झलनाथको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो?
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको मुद्दामा साक्षी बसेका अधिकारीले छोडे बिएण्डसीको अनुगमन समिति
कोपा अमेरिकामा पेरूलाई हराउँदै कोलम्बिया तेस्रो
अफगानिस्तान युद्धमा के अमेरिकाले अपेक्षा गरेको नतिजा पायो?
वायुको प्रदूषण कम गर्ने कार प्रदर्शनीमा
यसपल्टको कोपा धेरै खल्लो रह्यो । धेरैको विरोधपछि यो प्रतियोगिता भएको थियो । धेरैले प्रतियोगिताको समय र परिस्थितिलाई निको मानेनन् । तर यही कोपाले त्यस्तो फाइनल साइत जुराएको छ, जसको खेल हेर्न सबै लालयित हुने गर्छन् ।
सरकारले चीनबाट खरिद गरेर ल्याएको कोरोनाविरुद्धको खोप प्रदेशको चिस्यान केन्द्रमा पठाउन थालेको छ । चीनसँग खरिद गरिएको ४० लाख भेरोसेल खोपमध्ये शुक्रबार ८ लाख मात्रा ल्याइएको छ । बाँकी खोप साउन पहिलो सातासम्म ढुवानी गरिसक्ने सरकारको योजना छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री श्रेष्ठद्वारा युनिफाइड अस्पताल निरीक्षण, तेस्रो लहरको पूर्व तयारीमा जुट्न निर्देशन
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले वीर अस्पताल परिसरमा रहेको कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको अवलोकन गर्नुभएको छ । सो क्रममा उहाँले अब आउन सक्ने तेस्रो वेवको गम्भीरता पुर्वक पुर्वतयारीमा रहन निर्देशन दिनुभएको छ । सो अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठलाई स्वाथ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल र अस्पतालका निर्देशक डा जागेश्वर गौतम
एमाले एकता कार्यदल बैठक सहमति नजिक, भोलि निष्कर्षमा पुग्ने
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद मिलाउन गठित एकता कार्यदल सहमति नजिक पुगेको छ । शनिबार साँझ बसेको कार्यदल बैठक सहमति नजिक पुगेको अध्यक्ष ओली समूहका कार्यदल संयोजक सुवास नेम्वाङले बताए । उनले भोलि बिहान नै अन्तिम टुंगोमा पुग्ने गरी आजको बैठक सकिएको समेत बताएका छन् ।
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता सुरु भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच पौने ६ बजेदेखि भेटवार्ता सुरु भएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला आउने दिन नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रुपमा